About Us - Ningbo Zhongyi caaga Co., Ltd
Ningbo Zhongyi caaga Technology Co., Ltd waa soo saaraha khabiir ku ah wax soo saarka caag ah iyo sidoo kale sameeysa ah wasakhahaasi. Waxaan la nafteena ka go'an in ay cilmi-baarista, design iyo suuq-geynta ee xirmo habkii waxyaabaha dib loo cusboneysiin karo isticmaalo, awood si uu u bedelo xirmo hal mar nidaamka Baakadaha qalabka dib. Waxaan ujeedadoodu tahay inay bixiyaan tayada sare iyo wax soo saarka bey'ada saaxiibtinimo iyo adeegga super macaamiisha ku salaysan labadaba Shiinaha iyo dibada marka la eego bakhaaraynta, qaybinta iyo nidaamka gaadiidka loo cusboneysiin karo. The cilmi-baarista iyo fulinta totes habkii caag ka dhigaysa noo qaado meel faa'iidada badan ee naga warshadaha. Dhanka kale waxaan mar walba eegto bixinta jeedinta design kala for warshadaha iyo macaamiisha gaarka ah. Cuntooyinkan waxaa lagu iibin fog sida Germany, Netherlands, Belgium, US, HK, iwm
Waxaan leedahay in ka badan 20 injectors caag computer-ka taliso la awooda 100-10000 garaam. Waxaan ka helay 6 waaxaha qotomiyey, waaxda wax soo saarka, R & D (waxyaabaha cusub & CAD / caaryada Cam), soo dejinta iyo dhoofinta, ganacsiga gudaha, QC, bakhaar iyo gaadiidka. Waxaan ka helay awood fiican ee wax soo saarka iyo bakhaar & gaadiidka. Awoodda sanadlaha ah ee wax soo saarka kubado ku dhufan 8 malaayiin iyo awooda celceliska sannadlaha ah waa sarraysaa sida 20000 metric.
Our dhiga waa "dadka, curinta iyo Tayada". Waxaan rajaynayaa in aan xaqiijin karin waqti dheer iyo xiriirka ganacsi saaxiibtinimo ee macaamiisha adduunka oo dhan, waayo, danaha labada dhinac.